Waxaan falanqeyneynaa Insta360 Nano, oo ah kamarad 360-digrii ah oo loogu talagalay iPhone-kaaga | Wararka IPhone
Fiidiyowyo iyo sawirro 360-digrii ah ayaa bilaabay inay si ballaaran u gaaraan dadweynaha guud ahaan dhawaanahan, laakiin waxay si dhakhso leh ula qabsadeen sida ay indhaha u qabanayaan qaabku. In daqiiqad ah halka wax walba waxay ku wareegayaan waxyaabo badan oo ka mid ah warbaahinta, Awood u lahaanshaha in lagu fiirsado sawir kaliya ma ahan waxa saxda ah muraayadaha hortiisa, laakiin sidoo kale wax kasta oo ku hareeraysan, waa dabeecad lagu xisaabtamo.
Abuuritaanka waxyaabaha noocan ah si ay u noqdaan wax caadi ah, si kastaba ha noqotee, waxaa lagama maarmaan ah in ficil ahaan qaadashada sawirrada ama fiidiyowyadu ay joojiyaan inay noqdaan nidaam aan raaxo lahayn oo qaali ah. Maanta ma jiraan kamarado badan oo awood u leh cqabashada sawiro 360-degree ah iyo in aysan heysan wax ballanqaad ah oo la xiriira qiimahooda ama cabbirkooda, labada hantida ugu weyn ee ay ka ciyaari karaan. Intii lagu jiray usbuucyadii la soo dhaafay waxaan isku dayay mid ka mid ah kuwa, in badan ama ka yar, ka takhalusi kara baladhan, waana tan aan awooday inaan la kulmo.
1 La qaadan karo, is haysta, taasi kama dhigeyso inaad rabto inaad wax ku iloowdo guriga "qalad ahaan"
2 Hadaf, toogasho, wadaag
3 Dhowr erey
La qaadan karo, is haysta, taasi kama dhigeyso inaad rabto inaad wax ku iloowdo guriga "qalad ahaan"
Magaca qaabkani waa Insta360 Nano. Maya, anigu kama imid Valencia, mana iloobin inaan calaamado calaamadeyn ah ku rido xukunkii hore sidoo kale, kamaan baxsanin barnaamij kasta oo Telecinco ah. Ereyga "Nano" waxaa loola jeedaa munaasabadan cabirkeeda, taas oo ah runtii waa la dhimey haddii aragti ahaan la geliyo qaar ka mid ah kaamirooyinka maanta la heli karo suuqa. Tani waxay u oggolaaneysaa inay ku raaxeysato inaad ku qaadato jeebkaaga surwaalka ah oo aysan noqon mid aad u dhib badan markaad isticmaaleyso.
Dabeecaddeeda ugu weyn, si kastaba ha ahaatee, maahan tan. Waxa runtii kamaradda ka dhigaya mid gaar ah waa iyada ku xirnaanta iPhone adoo adeegsanaya hillaac, u beddelashada qalabka mid awood u leh inuu ku qabsado sawirro 360-digrii ah ilbiriqsiyo gudahood (sidoo kale si madax-bannaan ayaa loo isticmaali karaa iyadoo aan lagu xirin iPhone-ka). Codsigeeda u heellan wuxuu u adeegaa labadaba si loo muujiyo waxa kamaraddu qabato iyo in la daawado lana maareeyo sawirrada iyo fiidiyowyada markii la qaado
Markaad u gudubto faahfaahin farsamo oo aad u yar, waa wax lala yaabo in la helo a qaraarka 3040 × 1520 qalab sidan u yar. Natiijadu maaha mid kaamil ah sida sawirrada si toos ah loogu qaadi karo iPhone-ka, laakiin dhab ahaan ma xuma. Waxay ku dhex leedahay batteriga 800mAh taas, inkasta oo ay ku dhici karto adeegsiga degdegga ah, ma ahan inay dhibaato dhacdo inta badan.
Hadaf, toogasho, wadaag
Shabakadaha bulshada ayaa maanta ah nolosha xisbiga, boqorada mambo. Wax kasta oo dhaca waa in lagu daabaco, lala wadaago, lagu faalloodo halkaas. Sawirada 360º waa inaysan ka duwanaan haddii aysan ahayn xaqiiqda in qaar badan oo ka mid ah shabakadahan, iyo sidoo kale codsiyada fariimaha degdegga ah iyo wixii la mid ah, ma haysatid taageero wadaniyadeed in lagu muujiyo qaabkan noocan ah qaabka loo malaynayo in loo arko. Natiijada? Marar badan, si toos ah looma wadaago.
Insta360 nano way ka duwan tahay - dhibicdanina si aad iyo aad ah ayey ii la yaabtay - maxaa yeelay waxay leedahay xulashooyin u oggolaan doona qaataha inuu la kulmo dareenka daboolida meel kasta oo lagu wadaago. Marka lagu daro in lagu soo shubi karo barxadda ay shirkaddu bixiso oo markaa laga heli karo xiriiriye, waqtiga wadaagista sawirka waxaad abuuri kartaa animation taas oo si otomaatig ah u muujisa muuqaal gaar ah qaab wareeg ah oo fiidiyoow ah. Xiisahaan loo qabo sameynta waxyaabaha laga sameeyay 'bulsho' badan ayaa runtii ka dhigaysa farqi xiiso leh oo wanaagsan xagga isticmaalka kamaradaha maalinlaha ah.
Kamarad noocan ah, maanta, looma jeedin in si joogto ah loo isticmaalo maalin kasta, laakiin halkii loo isticmaali lahaa hab asli ah oo lagu soo qabto xusuusta iyo waayaha. Qeexitaankan dhexdiisa, Insta360 Nano ayaa si fudud isku difaaceysa, iyadoo ku habboon in meel kasta la qaado oo sawir ama fiidiyoow laga qaado si deg deg ah iyada oo aan wax dhibaato ah lagu darin marka la barbar dhigo sawir caadi ah oo dhaafsiisan in qalabka lagu xiro iPhone-ka.
Waxaad ka heli kartaa gudaha Amazon € 239, oo haddii aad isticmaasho lambarka sicir-dhimista L7P42U85 sicirka ayaa laga dhigi doonaa € 167 illaa Julaay 31.
Aad u yar, fududahay in la qaado Fursado badan oo lagu wadaagayo sawirrada Suurtagalnimada in sawirro laga qaado iyada oo aan la haynin xusuusta la ballaadhiyo ee iPhone iyada oo loo marayo kaarka microSD
Xaaladaha iftiinka hoose natiijada waa mid aad u liidata Barnaamijka loogu talagalay tafatirka fiidiyowga ee Mac-ga ayaa si weyn loo horumarin karaa
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » Qalabka IPhone » Falanqeyn: Insta360 Nano, kaamirada lagu duubayo sawirada iyo 360 fiidyow oo aad la socoto iPhone-kaaga
Amazon waxay ka shaqeyneysaa barnaamij fariin oo la yiraahdo Waqti kasta
Ku abuur sawirro xiiso leh dadka ama walxaha ku daweynaya Levitagram